Montenegro vs Romania - World Cup iru eru | Soccer amụma
World Cup iru eru
Match ụbọchị: 4 Sep 2017 | Ihe: 4 Sep 02:02 2017 GMT + 2 | NDỤMỌDỤ anya 594 ugboro.
Montenegro vs Romania – World Cup iru eru
Montenegro vs Romania – World Cup iru eru, Montenegro bụ 2nd na Group E na 13 ihe. Ha nwere otu ego nke isi ihe dị ka Denmark ma na-na-adọkpụrụ n'azụ Poland site atọ ihe. Mgbe o detusịrị doro mmeri Kazakhstan ụbọchị atọ gara aga, ha ga-abụ jupụtara nke obi ike na-abịa n'ime egwuregwu a. Ha na-enwe olileanya nke iru-abua ntụpọ nwere nnọọ ndị ha na-a mara ezigbo mma ọnọdụ n'oge na ihe a dị nnọọ ọbụna otu. They`ve kemgbe mara siri ike n'ụlọ a okirikiri, thrashing Kazakhstan na Armenia, mgbe adịkwa ihe naanị ka Poland. Maka egwuregwu a Tumbakovic ga nwere ya zuru squad na mkpofu.
Romania na 4th na 9 ihe, ebe e dere na abụọ Enwee Mmeri na ma na-megide Armenia. ikpeazụ, nke ruru ụbọchị atọ gara aga, bụ a mara mma edoghị otu, ebe ha jisiri agbaji Armenia naanị na 91st nkeji. Ha mere uche a ntaramahụhụ na 55th nkeji, ma ọ bụ ka enweghị ebe nso chọrọ ịrụ ọrụ na a dara ogbenye n'ụzọ iji wetara anọ game winless ọsọ na njedebe. Ha lere anya edoghị na ha nile egwuregwu wezụga 5:0 thrashing nke Armenia na ha fọrọ nke nta na-enweghị ezigbo Ohere nke na-eru n'ọnọdụ nke abụọ. dị ka Montenegro, Romania kwesịkwara na zuru squad ebe a.
Montenegro gosiri mara ezigbo mma arụmọrụ n'oge ndị a Qualifiers, na na mmeri megide Armenia guzo dị ka adịghị mma atụ. Romania na aka nke ọzọ, dissapointed na ha obibia na ha pụta na-egosi na. Montenegro nwere ezi uche Ohere nke ichebe abụọ ntụpọ na otu, karịsịa ebe ọ maara na ha ga-nọrọ n'ụlọ Denmark na October mgbe eti ha na ha ikpeazụ zutere. Ya mere, ha ga-achọ ihe atọ ebe a, na ga kwere na ha nwere ike inwe ha mgbe ọma show na Kazakhstan. Ịtụle Montenegro na-egwuri egwu n'ụlọ, na ha n'ozuzu mma echiche, M na-atụle ha na-ọkacha mmasị ebe a. Na mgbe Romania nwere ike Mike si a stalemate, M can`t-ahụ ha na-ewere ihe niile atọ ihe. Ya mere, akwado nile 0 Asia handicap yiri ka a ụzọ ziri ezi na-aga.
Olympiacos Piraeus vs Tottenham ( n'okpuru 2.5 ihe mgbaru ọsọ & 1.90 )